Wasiiradda Arrimaha Dibada Soomaaliya iyo Kenya oo ka wadahadlay xiisada Beled Xaawo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiiradda Arrimaha Dibada Soomaaliya iyo Kenya oo ka wadahadlay xiisada Beled Xaawo
Nairobi-(Puntland Mirror) Wasiiradda Arrimaha Dibada Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulan yeeshay.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo dhiggiisa Kenya Monica Juma ayaa Arbacadii kulan ku yeeshay magaalada Nayroobi, iyaga oo ka wadahadlay xiisada ka taagan xadka u dhaxeeya labada dal.
Labada wasiir ayaa isku afgartay in la fuliyo go’aankii madaxweynayaasha labada dal ay ka gaareen xiisada Beled Xaawo. Kuwaasoo khadka taleefoonka kuwada hadlay dhawaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyata ayaa wadahadal ay ku yeesheen khadka taleefoonka isku raacay in la hakiyo dhismaha derbiga ka socda xadka Kenya iyo Soomaaliya, wadahadalna lagu xaliyo arrimaha keenay xiisada.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa qorshaynaysa lacag cusub oo rasmi ah in ay soo daabacdo sanadka soo socda bilowgiisa iyadoo dowlada rabto in ay ku badasho lacagaha been-abuurka ah iyo in kor loo qaado ganacsiga dalka [...]